Aza miala sasatra, manaova sarontava！ - Smart Tech Technology
Vaovao Tohana ara-teknika Aza miala sasatra, manaova sarontava！
Aza miala sasatra, manaova sarontava！
Vao tsy ela akory izay, ireo karazana mutona misy ny coronavirus vaovao dia hita tany amin'ny firenena maro. Fa maninona no mora miova ilay coronavirus vaovao? Inona no vokatry ny fiovan'ny viriosy sy ny fampandrosoana vaksinina? Noho ny fisian'ny vaovao etsy ambony dia mipoitra ihany koa ny fikorontanan'ny vahoaka.
Nasongadin'ny fandinihana fa ny asidra aspartika asidra amino 614 (D) ao amin'ny proteinina spike an'ny coronavirus vaovao dia novaina ho glycine (G). Ity fiovan'ny asidra amine ity dia manakiana ny areti-mifindra amin'ny pathogen. Ny mpikaroka dia nanandrana ny habetsaky ny virus tamin'ireo mararin'ny pnemonia vaovao. Ny valiny dia naneho fa ny soritr'aretina G dia niteraka viriosy betsaka kokoa tamin'ny vatan'olombelona noho ny tsiranoka D. Ny soritr'aretin'ny G dia tsy nitondra taha ambony noho ny hopitaly, izay nanondro fa tsy niteraka aretina lehibe kokoa izany. Saingy ny viriosy mitondra asidra amino G dia mifindra kokoa.
Mbola ao anatin'ny vanim-potoana mampihetsi-po ny valanaretina. Ny olona rehetra dia tokony hitandrina, hadio ary hadio fitondran-tena, manao saron-tava, ary hampihena kely ny fivoahana.
Admin Aogositra 18, 2020
PreviousInona avy ireo karazana masinina saron-tava azo zaraina?
ManarakaMividy milina saron-tava hanombohana orinasa Facemask
Lahatsoratra mifandraika ...
Mividy milina saron-tava hanombohana orinasa Facemask
Fiheverana azo ampiharina amin'ny sarontava
Ahoana ny fomba hampihenana ny faharetan'ny fikojakojana ny masinina mivalona haingam-pandeha haingana
Saron-tava fandidiana Ply 3